गुल्मीमा केन्द्रीय नेताको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने, बाजी कस्ले मार्ला? – Gulminews
Home/निर्वाचन अप्डेट/गुल्मीमा केन्द्रीय नेताको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने, बाजी कस्ले मार्ला?
गुल्मीमा केन्द्रीय नेताको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने, बाजी कस्ले मार्ला?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ कार्तिक १२, आईतवार १६:५३ मा प्रकाशित
गुल्मीमा कुल एक लाख ९६ हजार तीन सय ४२ मतदाता छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा एक लाख पाँच हजार चार सय २५ र क्षेत्र नम्बर २ मा ९० हजार नौ सय १७ मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख गणेशबहादुर खत्रीले बताए । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख ८० हजार सात सय ७५ मतदाता थिए ।